“नाम भने सुब्बीनी, कसरी उभ्भीनि” « Sansar News
२७ कार्तिक २०७४, सोमबार ०८:०४
लोकतान्त्रिक मोर्चाको नाउमा भएका सभा अन्र्तवार्ता, अन्तरंग कुराकानी जतापनि सुनिएकै छ । यदि नेपालमा कम्युनिष्टहरुले जिते भने रुनु पाउदैन । यिनीहरुले साम्यवाद ल्याउँछन अझ प्रधानमन्त्री तथा नेपाल्री कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा त ०४८ सालमा निर्वाचन लड्दा पनि कम्युनिस्टहरुले ६० वर्षमा गोली ठोक्छन भन्दै भाषण गर्नुहुन्थ्यो । अहिले ३० वर्ष पनि भन्दै हुनुहुन्छ वामपन्थिहरुले सत्तामा पुगे रुनु पाइन्दैन ।
२७ कात्तिक, काठमाडौँ । ‘‘उहिले कुनै जमानामा यस संसारमा सुर्य मात्रै थिए । चन्द्रमा नभएको त्यस समयमा रात पर्ने कुरै भएन । रात भएपछि सुर्यअस्त हुने कुरै भएन त्यसकारण त्यो बेला भोली र हिजो को त कल्पनै गर्न सकिएृन । भोली र हिजो अर्थात भविष्य र भूत कुनै नभएपछि सबै आज अर्थात वर्तमान । ’’
यति अनुच्छेद दिएपछि विद्यार्थीलाई प्रस्त सोधियो ।
तिमि कहिले जन्मेको ? उत्तर आयो ‘‘आज’’
विहे कहिले गर्यो ? फेरि पनि उत्तर ‘‘आज’’
यो रमाईलो क्रिया प्राथमिक विद्यालयको विद्यार्थी हुँदा आजभन्दा ३० वर्ष पहिले हाम्रा गुरु बावु लाल भण्डारीले हामिलाई सुनाउनु भयो । ३० वर्षपछि गुरुले सुनाउनु भएको उक्त कृया अहिले पनि उत्तिकै सान्र्दभिक देखिएको छ । गुरुले सुनाउनु भएको काल्पनिक कथा अहिले हाम्रो यथार्थ जस्तो भएको छ ।
अझ वामपन्थि सहकार्य र वाममोर्चा निर्णय पक्रिया अगि बढेपछि गुरुले सुनाएको उक्त कथा काल्पनिक होईन वास्तविक बनेको छ । लोकतान्त्रिक मोर्चाको नाउमा भएका सभा अन्र्तवार्ता, अन्तरंग कुराकानी जतापनि सुनिएकै छ । यदि नेपालमा कम्युनिष्टहरुले जिते भने रुनु पाउदैन । यिनीहरुले साम्यवाद ल्याउँछन अझ प्रधानमन्त्री तथा नेपाल्री कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा त ०४८ सालमा निर्वाचन लड्दा पनि कम्युनिस्टहरुले ६० वर्षमा गोली ठोक्छन भन्दै भाषण गर्नुहुन्थ्यो । अहिले ३० वर्ष पनि भन्दै हुनुहुन्छ वामपन्थिहरुले सत्तामा पुगे रुनु पाइन्दैन ।
अल्पमत मिलिजुली सरकारले धोती खुस्काएर आखाँ छोपिदिएको लोकतान्त्रिक गठबन्धन लाई समयका तीन कालको बारेमा जानकारी नहुनु स्वाभाविकै हो । सायद त्यसैले होला देउवालाई वर्तमान भन्दा अन्य कालको वारेमा होस छैन । त्यसैले ३० वर्ष अगाडिको तन्द्रामा फेरि भन्दैछन । कम्युनिस्टहरु आए हुन पाउदैन् ।
तीन दशक वितिसक्दा पनि शेरबहादुरका लागि अझै रात नपरेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक मार्चाका नेताहरुलाई ३० वर्षसम्म पनि घाम अस्ताएको अध्यारो भएको र फेरि सुर्यदय भएको पत्तो नै भएन जस्तो छ । होस पनि कसरी ०५१ सालमा पहिलो पटक नेपालमा वाम सरकार वन्यो । देउवाले भाषण गरेभन्दा बेग्लै मनमोहन सरकारले ६० वर्ष पुरा भएका जेष्ठ नागरिकलाई गोली ठोकेको । बरु वृद्ध भत्ता दिएर सम्मान गर्यो । देउवा र उहाँको कथ्रीत प्रजातन्त्रको धोति त्यहिबाट फुस्कीन सुरु भैसकेको थियो । अल्पमतकै सरकारले फुत्क्याईदिएको धोती फेरि सम्हालेर लगाउन नपायदै ०७२ मा मिलिजुली सरकार बन्यो केपी ओलीको नेतृत्वमा । जुन सरकारका जनपक्षिय काम बाट अत्तालिएर देउवाहरु धोती समाएर दिल्ली पुग्नु पर्यो ओली सरकार ढाल्न ।
देउवालाई के थाहा समय, दिन, रात, साता, महिना र वर्ष हुँदै २६ वर्ष पुगीसक्यो ०४८ पछि ०७४ साल लागिसक्यो तर, उनको चेतनास्तर उती पुरानै छ । बालकथाले भनेजस्तै ।
फेरि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको अवस्था बाल्यकाल गुरुकै पछिल्लो फेसबुक स्टाटसमा जस्तै भएको छ, ‘‘ नाम भने सुब्बीनी , के खाएर उभ्भीनी ।’’ आफुलाई प्रजातन्त्रको मसीहा थान्ने लोकतान्त्रिक गठबन्धन अहिले एजेन्डा विहिन भएको छ । प्रजातन्त्रको अलापमा राग ताल सुरुको संयोजन हुन नसक्दा गठबन्धनको आवाज कर्कस बन्दै गईरहेको छ । यस्तै कर्कस स्वारमा ०४८ आसपासमा बोलीने बोली फेरि सुरु भएको छ । अर्थात बाल कथाको वर्तमान फेरि दोहोरिएको छ ।